Samaroonka Itoobiya oo dib u soo nooleynaya xisbigoodii qadiimka ahaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Samaroonka Itoobiya oo dib u soo nooleynaya xisbigoodii qadiimka ahaa
Samaroonka Itoobiya ayaa dib u soo nooleynaya xisbigoodii qadiimka ahaa ee Horyaal. Shir xalay si aada loogu lafogurey isbedelka ka socda Itoobiya halkaas oo xoriyadu soo noqonayso ayaa la isla gartey in aan dib loo jogsan isbedelka.
Jabhada Horyaal ayaa qayb weyn ka qaadatay dagaalkii Dhergiga looga xoreynaayay dhulka Somali galbeed, inkastoo burburkii dalka Somaliya iyo dhicitaankii Dhergiga ee Mingestu siyaasada ay dib uga istaageen.
Isbedelka ka dhacay Itoobiya ayaa u baahan in lala jaanqaado waana ta keentay in shir ka dhacay London la isla gartey in xisbi ahaan looga qaybqaato isbedelka cusub.
Deegaanada Samaroonka ee Itoobiya ayaa inta badan ayna jirin wax horumara dhinacyada Korontada, biyaha, wadooyinka, iyo beeraha. Dhinacyadaas aan soo sheegnay oo Itoobiya inteeda kale qaarna dhoofiso sida korontada qaarna ay isku filaansho ka gaartey laakiin deegaanku ka aradan yahay.
Hadaba shirka xalay ka dhacay London ayaa qodobo deg dega la isla gartey oo ay ka mid yihiin 1) in xisbigii Horyaal dib loo soo nooleeyo hadana loo bixiyo xisbiga dimoqraadiga Itoobiya ee Horyaal 2) in la dhiso guddi ka soo shaqaysa sidii xisbiga dhidibada loogu taagi lahaa haddana ay sii wadaan guddi ku meel gaara.
Waxa ismaamulka ka jira xisbiyo kale sida ONLF iyo kuwo kale. Isbedelka Itoobiya ka socda ayaa u baahan in lala jaanqaado ayadoo la filayo in xisbiyada la furo.